DEG DEG : Siyaasiyiin Xilal doona oo Shirqool halis ah u Maleegayo Madaxweyne FARMAAJO | Nabadoon Online & Nabadqaad .com
DEG DEG : Siyaasiyiin Xilal doona oo Shirqool halis ah u Maleegayo Madaxweyne FARMAAJO
Madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay ayaa isu diyaarinaya inuu tago xarunta Villa Somalia oo maalmaha soo socod uu macasalaamayn doono Xasan Sheekh oo Muddo Afar sano ah ka talinayay.
Balse iyadoo aysan wali xilalka la kala wareegin labada Mas’uul waxaa soo baxaya warar hoose oo sheegaya in durba la calmaday shakhsiyaadka noqonaya hogaanka xilal dhowr ah kuwaas oo ugu muhiimsan qasriga Madaxtooyada.
Saraakiil ka agdhow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagasoo xigtay in Madaxweynuhu qorsheeyay raggii laga dhigi lahaa, Agaasimaha Madaxtooyada, Agaasimaha hab-maamuuska iyo taliyaha ciidamada ilaaliyaha qasriga Madaxtooyada.
Xubnaha loo wado boosaskaas ayaa isugu jira kuwo xilal kasoo qabtay Villa Somalia iyo kuwo agdhow mudane Farmaajo.
Warar lagu kalsoonaan karo aan ka helnay ilo wareedyo ku xeeran Madaxweynaha cusub ayaa sheegaya in mudane Farmaajo uu u wado taliyaha ciidamada Madaxtooyada nin lagu magacaabo General Cabdullaahi Cali Caanood oo horay ula soo shaqeeyay dowladda Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Agaasimaha Madaxtooyada ayaa sidoo kale la qorshaynayaa inuu noqdo Tabid Cabdi Maxamed oo soo noqday safiir ku-xigeenka safaaradda Somalia ee dalka Maraykanka.
Tabid ayaa soo noqday Agaasime ku-xigeenka madaxtooyada Somalia, waxaana hadda uu kamid yahay saraakiisha aadka ugu dhow mudane Farmaajo.
Qorshahan ayaa soo shaac-baxay xilli dhalinyaro badan aad u raadinayaan inay ka dhex-muuqdaan xilalka muhiimka ah ee Madaxtooyada Somalia, kuwaasoo qayb ka ahaa ololihiisa doorashada.
Lama oga habka uu wax usoo magacaabi doono mudane Farmaajo oo aad looga taageeray gudo iyo dibad guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 08 February 2017.